Bakka buutoota naannoo Tigraay walga’iirratti hin argamnerratti tarkaanfiin ni fudhatama – Af yaa’ii Taaggasee Caafoo – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Bakka buutoota naannoo Tigraay walga’iirratti hin argamnerratti tarkaanfiin ni fudhatama – Af yaa’ii Taaggasee Caafoo
On Oct 21, 2020 382
Finfinnee, Onkololeessa 11, 2013 (FBC) – Bakka buutoota naannoo Tigraay walga’iirratti hin argamnerratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta’uu Af yaa’iin Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa obbo Taaggasee Caafoon himan.
Miseensoota bakka buutoota Ummataa naannoo Tigraay walga’ii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarratti hin argamnerratti tarkaanfiin bulchinsaan kan fudhatamu ta’uu Af yaa’iin mana marichaa obbo Taaggasee Caafoo ibsaniiru.
Af yaa’iin Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa obbo Taaggasee Caafoon dhimmoota garaagaraarratti ibsa laataniiru.
Walga’ii mana marichaa lamaan darbanirratti nama tokkoon ala miseensoonni bakka buutoota Ummataa naannoo Tigraay kan hin argamne ta’uu ibsaniiru.
Manni marichaa waamicha taasisuus miseensoonni kunneen waan hin argamneef tarkaanfiin bulchiinsaa irratti ni fudhatama jedhan.
Rakkoo kamiiyyuu karaa nagaan hiikuun osoo danda’amu biyya diiguuf adeemsi deemamu fudhatama hin qabaatu jedhan.
Obbo Taaggasee Caafoon filannoo bara kana gaggeeffamuuf Boordiin Filannoo Biyyaalessa dhiyeessii meeshalee %90 xumuruu ibsaniiru.
Filannichi demookraatawaa fi haqa qabeessa akka ta’uu qophiin paartiilee morkattootaa murteessaa ta’uu eeraniiru.
Manni marichaa lammiilee balaa lolaan miidhamaniif deeggarsa meeshaalee Birrii miiliyoona 40 taasisuus himaniiru.
Weerara hoomaa Awwaannisa gammoojjii iddoolee garaagaraatti muudate gamaaggamuuf jilli miseensota mana marichaa bakka adda addaatti socha’uu dubbataniiri.
Paarkiin Tokkummaa ogeessoota ijaarsa bakka jireenyaa bineeldootaaf gumaacha isaani…
Iyoophiyaa fi Swiidiin hariiroo baroota dheeraa waliin qaban cimsanii akka itti fufan…
Koreen waloo raayyaa ittisa biyyaa Ityoo Sudaan marii waliinii gaggeesseera
Olaantummaa seeraa kabachiisuuf bu’uuraalee misoomaa miidhaaman suphuun hojiin baruu…
Magaalaa Shashamanneetti uffataaleen gosti garaagaraa fi…
Gareen ABUT Sudaan Kibbaa akka hin tasgabboofne hojjetaa…
Koreen hojii raawwachiiftuu Paartii Badhaadhinaa walga’ii…
Paarkiin Tokkummaa ogeessoota ijaarsa bakka jireenyaa…
Iyoophiyaa fi Swiidiin hariiroo baroota dheeraa waliin qaban…
Koreen waloo raayyaa ittisa biyyaa Ityoo Sudaan marii…
Oduu biyya keessaa4192